Tolotra: fikarohana sy boky | Valin'ny Fanamarinana
Home Resources Navoaka ny fikarohana
Ity loharanom-baovao ity dia manome ny lisitry ny loham-pikarohana fototra sy boky izay apetratsika amin'ity tranonkala ity. Ny boky fikarohana dia navoaka tao amin'ny gazetiboky navoakan'ny peer, ka mahatonga azy ireny ho loharanom-baovao azo antoka.
Ny taratasy dia voatanisa amin'ny abidia abidia amin'ny anaram-bosotra mpanoratra mpanoratra. Nampidirinay ny sombin-taratasy tany am-boalohany na ny famintinana ny taratasy, ary koa ny tolo-kevitra momba ny fomba hahazoana ny taratasy iray manontolo.
Raha mila fanampiana bebe kokoa ianao amin'ny fahazoana miditra amin'ny fikarohana, dia jereo ny torolalana Accessing Research.
Ahn HM, Chung HJ sy Kim SH. Ny fiheveran'ny atidoha amin'ny alàlan'ny baiko fitetezam-paritra taorian'ny fanandraman'ny baolina kitra in Cyberpsychology, Fifandraisana ary ny tambajotra sosialy, 2015 Aug; 18 (8): 474-9. doi: 10.1089 / cyber.2015.0185.
Ny olona izay milalao lalao amin'ny Internet dia maneho loatra ny fihetseham-pon'ny ati-doha amin'ny siansa mifandraika amin'ny lalao. Ity fikarohana ity dia nanandrana ny hitsapa raha toa ka mihetsiketsika be loatra ao amin'ny lalao mpilalao ny vokatr'izany dia vokatry ny fiverimberenan'ny lalao amin'ny Internet. Ireo olon-dehibe zokiolona tsy manana tantaram-pahamehana ny lalao tamin'ny Internet dia noraisina ary nomena baiko izy ireo mba hilalao lalao amin'ny aterineto ho an'ny 2 ora / andro ho an'ny herinandro dimy mifanesy. Vondrona roa fanaraha-maso no nampiasaina: ny vondrona mpanao fampisehoana, izay niheverana ny fampisehoana fahitalavitra fanta-daza, ary ny vondrona tsy misy fatra, izay tsy nahitam-bokatra. Ny mpandray anjara rehetra dia nanao ny lahasa fitakiana fanehoan-kevitra miaraka amin'ny lalao, tantara an-tsehatra, ary ny tsy fisian'ny aterineto ao amin'ny atidoha scanner, na alohan'ny aorian'ny sesitany. Ny vondrona lalao dia nampiseho fihenanam-pitenenana goavana ho an'ny sehatra lalao eo amin'ny vondron'antoko teo aloha (VLPFC). Ny fampitomboana ny fampiakarana ny VLPFC dia nifanaraka tamin'ny fampitomboana ny firoboroboan'ny faniriana ny lalao. Ny vondrona mpanao fampisehoana dia nampiseho fihetsika mahery fihetsika ho setrin'ny fampisehoana ny fampisehoana tantara an-tsehatra ao amin'ny cudate, ny cingulate aoriana ary ny precuneus. Ny valiny dia maneho fa ny fijerena ny lalao amin'ny Internet na ny fampisehoana amin'ny TV dia manamafy ny fihetseham-po amin'ny sehatra sioka mifandraika amin'ny fisehoan-javatra manokana. Ny mari-pamantarana marina anefa dia toa tsy mitovy amin'ny karazana fampahalalam-baovao. Ny fiovana eo amin'ny faritra tsirairay dia manatsara ny fandrosoana amin'ny fanirian-doha manoloana ny fanadihadiana any aoriana.
Ity singa ity dia ao ambadiky ny rindrambaiko Eto. jereo Ahoana no ahazoako miditra amin'ny fikarohana? ho an'ny soso-kevitra momba ny fidirana.
Baumeister RF sy Tierney J. 2011 Willpower: Famantaranandro ny tanjaka tsara indrindra Penguin Press. Azo vidiana io boky io Eto.
Beyens I, Vandenbosch L sy Eggermont S Ny fifandraisany amin'ny sary vetaveta amin'ny Internet momba ny fandehanana am-pianarana, ny fahatsapana fitadiavana, ary ny fahombiazan'ny fianarana in Ny Journal of Early Adolescence, Novambra 2015 vol. 35 no. 8 1045-1068. (Fahasalamana)
Ny fikarohana dia nampiseho fa ny tanora dia mampiasa sary vetaveta amin'ny Internet. Ity fandaharam-pandinihana roa tavoahangy ity dia natao hijerena modely tafiditra ao amin'ny tovovavy tanora (Mage = 14.10; N = 325) izay manazava ny fijerin'izy ireo ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fijerena ny fifandraisana amin'ny fandaharam-potoana sy ny fahatsapana fitadiavana, ary b) dia manadihady ny vokatra mety hitranga amin'ny fijerena sary vetaveta amin'ny aterineto noho ny fahaiza-manaon'izy ireo. Ny modelim-pifandraisana iray dia nampiseho fa ny fandaharam-potoana ara-potoana sy ny fahatsapana dia nanambara ny fampiasana ny sary vetaveta amin'ny Internet. Ankizilahy miaraka amin'ny dingana ambony sy ny tovovavy milefitra amin'ny fahatsapana fatratra mitady fijerena sary vetaveta amin'ny Internet. Ambonin'izany, ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet dia nihena ny fahombiazan'ny zazalahy 6 volana maro taty aoriana. Ny fifanakalozan-kevitra dia mifantoka amin'ny vokatr'ity modely mifototra ity ho an'ny fikarohana amin'ny ho avy momba ny pôrnôgrafia amin'ny Internet.
Bridges AJ, Wosnitzer R, Scharrer E, Masoandro C, Liberman R Fihetsiketsehana sy fitondran-tena amin'ny vidéo malaza amin'ny sary vetaveta: fanavaozam-baovao momba ny votoaty in Herisetra amin'ny vehivavy. 2010 Oct; 16 (10): 1065-85. doi: 10.1177 / 1077801210382866. (Fahasalamana)
Ity fandalinana ankehitriny ity dia mamakafaka ny atin'ny horonan-tsary mamoa fady malaza, miaraka amin'ny tanjon'ny fanavaozana ny fisehoan'ny herisetra, fahasimbana ary fomba fanao ara-nofo ary mampitaha ny valin'ny fandalinana tamin'ny fanadihadiana fanadihadiana votoaty teo aloha. Ny fikarohana dia manondro ny habetsaky ny herisetra amin'ny pôrnôgrafia amin'ny endrika vava sy ara-batana. Amin'ireo seho 304 nohadihadiana, 88.2% no nahitana herisetra ara-batana, fikapohana, fanodinkodinana ary fikapohana, raha 48.7% kosa ny tabilao misy herisetra am-bava, fiantsoana anarana. Matetika lahy ny mpanohitra ny herisetra, ny vehivavy kosa lasibatra amin'ny herisetra. Ny tanjona matetika matetika dia nampiseho fahafinaretana na namaly tsy miandany ny herisetra.
Cheng S, Ma J ary Missari S Ny fiantraikan'ny fampiasana ny aterineto amin'ny fifankatiavana sy ny firaisana ara-nofo eo amin'ny tanora ao Taiwan in Sosialy iraisam-pirenena Jolay 2014, vol. 29, tsia. 4, pp 324-347. doi: 10.1177 / 0268580914538084. (Fahasalamana)
Ny fampiasana ny Internet sy ny tambajotra nomerika dia ampahany manan-danja amin'ny fiainam-pianakaviana tanora. Ity fandinihana ity dia mandinika ny fiantraikan'ny fampiasana ny aterineto any Taiwan amin'ny adihevitra ara-tsosialy roa manan-danja: fifankatiavana am-pitiavana sy fanabeazana ara-pananahana voalohany. Mampiasa ny angon-drakitra avy amin'ny tetikasa Taiwaney Taiwan (TYP), 2000-2009, ny valin'ny fandalinana tantara momba ny zava-nitranga dia manolotra fa ny fampiasana ny Internet amin'ny fampiasana ny Internet ho an'ny tanjona ara-pampianarana dia mampihena ny tahan'ny fifandraisana am-pitiavana voalohany sy fanabeazana ara-pananahana amin'ny adolescence, raha mampiasa Internet ho an'ny tambajotra sosialy, mitsidika ny cybercafés amin'ny aterineto, sy ny fanaraha-maso ny tranonkala mamoafady dia mampitombo ny tahan'ny. Misy fahasamihafana eo amin'ny lahy sy vavy amin'ny fiantraikan'ireny hetsika Internet ao amin'ny traikefa niainan'ny tanora ireny. Ny fanadihadiana amin'ny logistic koa dia mampiseho fa ny hetsika Internet ihany koa dia misy fiantraikany amin'ny mety ho an'ny adolescents raha adihevitra ara-piraisana ny tanora raha toa ka misy fifandraisana amam-pitiavana voalohany. Ny fiantraikan'ireo fikarohana ireo dia resahina ao amin'ny famaranana.
Ity singa ity dia ao ambadiky ny rindrambaiko Eto. jereo Ahoana no ahazoako miditra amin'ny fikarohana? ho an'ny tolo-kevitra momba ny fidirana. ”> eto.
Dunkley, Victoria 2015 Avereno atao ny ati-dohan'ny zanakao: Drafitra efa-bolana hamaranana ny fikorontanan-tsaina, hampiakarana ny naoty ary hampitomboana ny fahaiza-manao ara-tsosialy amin'ny famadihana ny vokan'ny fotoana elektronika. Paperback. New World Library ISBN-10: 1608682846
Ny fampitomboana ny isan'ny ray aman-dreny dia mitambatra amin'ny ankizy izay manao zavatra tsy misy antony. Maro amin'ireo ankizy ireo no voan'ny aretin'ny ADHD, bipolar, na autism spectrum. Avy eo dia voan'ny aretin-tsika matetika izy ireo vokatry ny fahantrana mahatsiravina sy ny vokany. Victoria Dunckley dia miara-miasa amin'ny ankizy sy ny fianakaviana izay tsy nahavita namaly ny fitsaboana teo aloha ary nanao mpisava lalana vaovao. Ao amin'ny asany miaraka amin'ny zaza 500 mihoatra ny ankizy, tanora sy tanora no hita fa voan'ny aretina ara-pahasalamana, ny 80 isan-jato dia nanatsara ny fandaharana efa-bolana izay natolotra teto. Fitaovana interactive, anisan'izany ny lalao video, ordinatera, finday, ary takelaka manintona ny rafi-pitabataban'ny ankizy. Na dia tsy misy na iza na iza amin'ny tontolo mifandraika amin'izao tontolo izao dia afaka manafoana tanteraka ny fanentanana elektronika, i Dunckley dia maneho ny fomba ahafahan'ireo ankabetsaka indrindra eo amintsika ary tokony ho voatsimbina ny voka-dratsiny
Gouin JP, Carter S, Pournajafi-Nazarlooc H, Glaser R, Malarkey WB, Loving TJ, Stowell J, ary Kiecolt-Glaser JK Ny marary, Oxytocine, Vasopressin, ary ny fanasitranana in Psychoneuroendocrinology. 2010 August; 35 (7): 1082-1090. doi: 10.1016 / j.psyneuen.2010.01.009. (Fifandraisana)
Ny fianarana biby dia nampidirina oxytocine sy vasopressin tamin'ny fifandraisana ara-tsosialy, valin-kitsim-po ara-pihetseham-batana, ary fanasitranana ratra. Ao amin'ny olombelona, ​​ny oxytocine endogenous sy vasopressin endri-javatra dia mihevi-tena amin'ny fahitana ny kalitaon'ny fifandraisana, ny fitondran-tenan'ny mpivady, ary ny valin'ny fitsaboana ara-batana. Ho fanadihadiana ny fifandraisana eo amin'ny fitondran-tena, oxytocine, vasopressine, ary ny fanasitranana amin'ny ratra, ary ny famaritana ny toetran'ny olona manana haavo neuropeptide avo indrindra, ny mpivady 37 dia neken'ny fitsidihana 24 ora ora tao amin'ny tobim-pikarohana fikarohana. Rehefa noforonina tamin'ny ratra madinika ny ratra madinika, dia nandray anjara tamin'ny fifanakalozan-kevitra ara-tsosialy ny fanohanana ara-tsosialy. Ny tranokala blister dia narahina isan'andro taorian'ny fanonganam-panjakana mba hanombanana haingana ny fikolokoloana ratra. Ny taharo ra dia nangonina ho an'ny oxytocine, vasopressine, sy ny cytokine. Ny haavo oxytocine avo lenta dia mifandray amin'ny fihetsika tsara kokoa amin'ny fifandraisana mandritra ny fiasa mifandraika amin'ny rafitra. Ankoatra izany, ny olona ao amin'ny ampahefatry ny oxytocin ambony dia nanasitrana ny blistera noho ny mpandray anjara tamin'ny ampahefatry ny oxytocine quartiles. Ny haavon'ny vasopressina avo kokoa dia mifandraika amin'ny fihetsika tsy dia tsara loatra amin'ny fifandraisana ary ny fitomboan'ny voan'ny necrosis - ny famokarana. Ankoatra izany, ny vehivavy ao amin'ny vasopressin quartile ambony dia nanasitrana ny ratra fanandramana haingana kokoa noho ny ambiny ny ohatra. Ireo tahirin-kevitra ireo dia manamafy sy manitatra ny porofo mialoha izay miteraka oxytocine sy vasopressin amin'ny fihetsiketseham-po tsara sy tsy misy fifandraisana amin'ny mpivady, ary koa manome porofo fanampiny momba ny anjara asany amin'ny vokatra ara-pahasalamana lehibe, fanasitranana maratra.
Ny taratasy feno dia azo alaina maimaim-poana Eto.
Johnson sy Kenny PJ Fanampiana tranainy toy ny dysfunction sy fihinanan-tsakafo amin'ny raty miboridana: Ny anjara asan'ny dopamine D2 receptors in Neuroscience Nature. May Xuumx; 2010 (13): 5-635. Navoaka tamin'ny aterineto 641 Mar 2010. doi: 28 / nn.10.1038
Hitantsika fa ny fampiroboroboana ny fivalozana dia mifamatotra amin'ny fisongan'ny tsy fahampian'ny fiovaovan'ny atidoha. Toy izany koa ny fiovana toy izany amin'ny homamiadan'ny tokantrano indostrian'ny kôkainina na heroine raha oharina amin'ny fidiram-bola amin'ny fifindran'ny aretina. Araka izany, dia nahatsikaritra fihetsika toy ny fihinanan-kena isika tamin'ny fihinanan-kena, fa tsy hoe lefona, izay noheverina ho ny fihinanana sakafo marefo izay manohitra ny fanakorontanana noho ny fisainana manjavozavo. Striatal dopamine D2 receptors (D2R) dia nidina ambany amin'ny raty ankeriny, mitovy amin'ireo tatitra teo aloha tamin'ny mpidoroka zava-mahadomelina olombelona. Ankoatra izany, ny fampihorohoroana lentivirus avy amin'ny lozam-pifamoivoizana D2R dia nanamora haingana ny fampandrosoana ny tsy fitoviana amin'ny karama sy ny fanombohana ny fividianana sakafo toy ny sakafo mikaroka amin'ny voalavo miaraka amin'ny fidirana amin'ny sakafo matavy be matavy. Ireo tahirin-kevitra ireo dia mampiseho fa ny fialana amin'ny sakafo marefo dia manosika ny valim-panadinana tsy misy valiny amin'ny valim-panadinana an-tsitrapo ary mitondra ny fivoaran'ny fihinanana sakafo. Ny fihetsika hedonika matetika dia mety hianjadian'ny fanoheran'ny rongony sy ny fidorohana zava-mahadomelina.
Ny lahatsoratra dia misy maimaim-poana Eto.
Johnson ZV sy Young LJ Ny rafitra nerobiolojika amin'ny fifandraisana ara-tsosialy sy ny fifamatorana eo amin'ny fiheverana amin'izao fotoana izao in Siansa momba ny fitondran-tena. 2015 Jun; 3: 38-44. doi: 10.1016 / j.cobeha.2015.01.009. (Fifandraisana)
Ny karazan-tsakafo dia nivelatra ny fitondran-tena sosialy sy ny paikady matotra ho valin'ny hery mifototra amin'ny tontolo iainany. Raha ny promiscuity no tetikady matihanina matihanina amin'ny ankamaroan'ny taxa, ny fivoaran'ny fivoaran-java-manahirana ny rafi-pandehanana dia miteraka imasom-bahoaka maro. Ny fitondran-tena manala baraka dia heverina ho fanamorana ny fahaiza-manao amin'ny fifindran'ny fiaraha-monina, ny fifamatorana eo amin'ny samy lahy na ny vavy, miaraka amin'ny mpifankatia. Ny rafi-pitondran'ny fifandraisana amin'ny fifandraisana dia nodinihina tamin'ny ankamaroan'ireo mikraoba miktrano, izay mampiseho fikambanana sosialy samihafa. Ireo fanadihadiana ireo dia nanasongadina ny dopamine mesolimbic, ny neuropeptide sosialy (oxytocine sy vasopressin), ary ny rafitra hafa tsy dia mahazatra toy ny singa manan-danja amin'ny fanabeazana sy ny fikojakojana ary ny fanehoana ny fifamatorana.
Ny taratasy feno dia hita maimaim-poana amin'ny aterineto Eto.
Kastbom, AA, Sydsjö G, Bladh M, Priebe G, sy Svedin CG Ny fanabeazana ara-nofo alohan'ny taona 14 dia mitondra any amin'ny fahasalamana ara-pahasalamana mahatsiravina sy ny fitondran-tena mampidi-doza any aoriana in Acta Paediatrica, Volana 104, Issue 1, pejy 91-100, Janoary 2015. DOI: 10.1111 / apa.12803. (Fahasalamana)
Tanjona: Ity fikarohana ity dia namotopototra ny fifandraisana misy eo amin'ny sehatry ny firaisana ara-nofo talohan'ny 14 taona sy ny sosialin'ny demografika, ny traikefa ara-nofo, ny fahasalamana, ny traikefa mikasika ny fanararaotana ankizy sy ny fitondrantena amin'ny 18 taona.
Fomba fanao: Ny santionan'ny mpianatry ny sekoly ambaratonga ambony teratany 3432 dia nahavita fanadihadiana momba ny firaisana ara-nofo, fahasalamana ary fanararaotana tamin'ny taona 18.
Vokatra: Voalohany tamin'ny dingana voalohany dia nifanaraka tamin'ny fitondran-tena mampidi-doza, toy ny isan'ireo mpiara-miasa, traikefa amin'ny taovam-pananahana sy ny anal, fitondran-tena momba ny fahasalamana, toy ny fifohana sigara, ny fampiasana zava-mahadomelina sy ny alikaola, ary ny fihetsika manohitra ny fiarahamonina, toy ny herisetra, ny lainga, ny halatra ary mihazakazaka lavitra ny trano. Ny ankizivavy manana ny laharam-piraisana voalohany dia nanana traikefa bebe kokoa mikasika ny fanararaotana ara-nofo. Ny ankizilahy miaraka amina lahasa ara-pananahana vao haingana dia mety hanana fahatsapana fahamendrehana, fihenanam-po, ary fahasalamana ara-pahasalamana, miaraka amin'ny traikefa momba ny fanararaotana ara-nofo, fivarotana firaisana ara-nofo sy ny fanararaotana ara-batana. Ny modelim-pahaizana momba ny logistika maromaro dia naneho fa maro ny fihetsika sy ny fihetsika ara-pahasalamana maromaro no nitoetra ho marina, saingy ny fiandohan'ny resaka firaisana ara-nofo aloha dia tsy nampitombo ny mety hisian'ny soritr'aretina ara-pahasalamana, ny fahamendrehan'ny tena manokana na ny fahatsapan'ny fiarahan'ny 18 taona.
Famaranana: Nanomboka ny fampidiran-dresaka vao haingana ny lahasa ara-pananahana vao haingana, ary mitaky fiheverana avy amin'ny ray aman-dreny sy ny mpamatsy fahasalamana izany fahabangana izany.
Azo alaina ity lahatsoratra feno ity Eto.
Ko CH, Liu TL, Wang PW, Chen CS, Yen CF ary Yen JY Ny fihanaky ny fahaketrahana, ny fankahalana ary ny fanahiana ara-tsosialy mandritra ny fiankinan-doha amin'ny aterineto eo amin'ny tanora: fianarana ho avy in Psychiatry tanteraka Volana 55, Issue 6, Pejy 1377-1384. Epub 2014 May 17. doi: 10.1016 / j.comppsych.2014.05.003. (Fahasalamana)
FANDRAISANA: Mitombo be ny isan'ny olon-dehibe amin'ny ankamaroan'ny tanora, ary matetika izy ireo no kivy, manjakazaka, ary mampanahy ny tanora. Ity fandinihana ity dia natao hanombanana ny fihanaky ny fahaketrahana, ny fankahalana ary ny tebiteby ara-tsosialy raha ny fahazoana fiankinan-doha amin'ny Internet na ny fialana amin'ny fiankinan-doha amin'ny Internet eo amin'ny tanora.
FAMPIANARANA: Nanadihady ireo tanora 2,293 tao amin'ny 7 ity fandinihana ity mba hanombanana ny fahaketrahana, ny fankahalana, ny fanahiana ara-tsosialy sy ny fiankinan-doha amin'ny Internet. Ny valiny mitovy ihany dia averimberina herintaona taty aoriana. Ny vondrona mpikatroka dia nofaritana ho olom-pirenena sokajiana ho tsy mpidoroka amin'ny fanombanana voalohany ary toy ny mpidoroka amin'ny fanombanana faharoa. Ny vondrona mpamonjy voina dia nofaritana ho olom-pirenena sokajiana ho mpandevenana amin'ny fanombanana voalohany ary ho toy ny tsy tafalatsaka ao anatin'ny fanombanana faharoa.
RESULT: Ny antokon'olona dia mampiseho ny fahakelezana sy ny fankahalana bebe kokoa noho ny vondrona tsy mampiankin-doha ary ny fiantraikan'ny fahaketrahana dia matanjaka kokoa amin'ireo zazavavy adolescent. Ankoatra izany, ny vondrona mpamonjy voina dia nampihena ny fahaketrahana, ny fankahalana ary ny tebiteby ara-tsosialy noho ny vondron'ny fiankinan-doha maharitra.
FAMARANANA: Ny fahakiviana sy ny fankahalana dia miharatsy amin'ny dingan'ny fiankinan-doha amin'ny Internet eo anivon'ny tanora. Ny fampidirana ny fiankinan-doha amin'ny Internet dia tokony omena mba hisorohana ny fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamana ara-tsaina. Ny fahakiviana, ny fankahalana ary ny tebiteby ara-tsosialy dia nihena tamin'ny dingan'ny famotsorana. Nanolo-kevitra izy fa mety hiverina ny voka-dratsiny raha azo alefa ao anatin'ny fotoana fohy ny fiankinan-doha amin'ny Internet.
Kühn, S ary Gallinat J Ny firafitry ny atidoha sy ny fifandraisana mifandraika amin'ny fiterahana amin'ny pôrnôgrafia: ny atidoha amin'ny pôrnôs in JAMA Psychiatry. 2014; 71(7):827-834. doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.93.
Zava-dehibe: Hatramin'ny nipoitra tao amin'ny Internet ny pôrnôgrafia, dia nihanitatra sy nahasarika mpampiasa an-tapitrisany ny fidirana, ny fahamendrehana, ary ny tsy fitononana anarana ny filàna ara-nofo mahatsiravina. Raha jerena amin'ny fiheverana fa ny fihenanam-bady pôrnôgrafia dia mitovitovy amin'ny fitadiavana valisoa, fitadiavana karazana fitadiavam-baovao, ary fitondran-tena mampihetsi-po, no niheverantsika ny fanovàna ny tamba-jotra teo aloha amin'ny mpampiasa matetika.
Tanjona: Mba hahitana raha mifandray amin'ny tamba-jotra teo aloha ny fihenam-bavam-pirazanana matetika.
Famolavolana, fametrahana, ary mpandray anjara Nandritra ny fanadihadiana natao tao amin'ny Max Planck Institute for Human Development ao Berlin, Alemana, 64 olon-dehibe lahy salama momba ny fihenan'ny sary vetaveta samihafa dia nitatitra ny ora famoahana sary vetaveta isan-kerinandro. Ny fampiasana sary vetaveta dia mifandray amin'ny rafitra nerlandey, ny fametahana asa mifandraika amin'izany, ary ny fifandraisana mahazatra amin'ny fanjakana.
Ny vokatra fototra sy ny voka-trondro mena Ny volombavan'ny atidoha dia nodinin'ny morphometry voxel mifototra amin'ny fitomboan'ny vozona sy ny fialan-tsasam-peo mifandraika amin'ny toetr'andro dia nodinihana tamin'ny alàlan'ny fantsom-pahaizan'ny magnetron 3-T.
Valiny Nahitanay fiarahana ratsy teo amin'ny ora nateraky ny sary vetaveta isan-kerinandro sy ny volon'ny volondavenona tao amin'ny caudate havanana (P <.001, namboarina noho ny fampitahana marobe) ary koa ny fiasa miasa mandritra ny paradigma fanaovana firaisana ara-nofo-amin'ny réactivité-n'ny havia putamen ( P <.001). Ny fampifandraisana mivantana ny caudate havanana amin'ny kort prefrontal dorsolateral havia dia mifandray ratsy amin'ny ora fihinanana sary vetaveta.
Ny fehin-kevitra sy ny lanjany Ny fiaraha-monina miiba amin'ny filazam-pahaizana manokana momba ny pôrnôgrafia miaraka amin'ny taham-pahavitrihana (caudate), left activation striatum (putamen) nandritra ny fitakiana fitakiana, ary ny fihenanam-pandaminana ambany kokoa amin'ny kadraty matevina mankany amin'ny dorsolateral aloha dia mety maneho ny fiovana amin'ny neural Ny plastika dia vokatry ny fanentanana mahery vaika ny rafitra valisoa, miaraka amin'ny fihenan-java-manidina ambany kokoa eo amin'ny faritra misy azy. Na izany aza, mety ho fepetra izany izay mahatonga ny sary mamoafady ho mendrika kokoa.
Ity lahatsoratra ity dia misy maimaim-poana Eto.
Lambert NM, Negash S, Stillman TF, Olmstead SB, ary Fincham FD Fitiavana tsy maharitra: fanjifana sary vetaveta ary fanalefahana ny fanoloran-tena ho an'ny mpiara-mitory tantaram-pitiavana in Journal of Psychology and Psychology: Vol. 31, No. 4, p. 410-438, 2012. doi: 10.1521 / jscp.2012.31.4.410. (Fahasalamana)
Nandinika isika raha misy fiantraikany amin'ny fifandraisana am-pitiavana ny fihenan'ny pôrnôgrafia, miaraka amin'ny fanantenana fa ny fihenanam-pon'ny sary vetaveta dia mifanaraka amin'ny fahabetsahan'ny fanoloran-tena amin'ny fifandraisana amam-behivavy tanora. Ny fianarana 1 (n = 367) dia nahatsikaritra fa ny fihenanam-pon'ny sary vetaveta dia mifandray amin'ny fanoloran-tena kely kokoa, ary ny Study 2 (n = 34) dia nanavao ity fikarohana ity amin'ny fampiasana angona azo antoka. Ny fianarana 3 (n = 20) dia nomena an-tsitrapo na tsy nijery ny fijerena sary vetaveta na ho an'ny fifehezan-tena. Ireo izay nanohy nampiasa sary vetaveta dia nitatitra fa ambany ny fanoloran-tena noho ny fanaraha-maso ny mpandray anjara Ao amin'ny Fianarana 4 (n = 67), ireo mpandray anjara izay miha-pihetsika bebe kokoa amin'ny sary vetaveta dia nifankazatra kokoa tamin'ny mpiara-miombon'antoka hafahafa nandritra ny chat iray anaty aterineto. Ny fianarana 5 (n = 240) dia nahatsikaritra fa ny fihenanam-pihariana pôrnôgrafika dia mifamatotra amin'ny tsy fifankahazoana ary ny fikambanana dia nozahin'ny fanoloran-tena. Amin'ny ankapobeny, ny laminasa misy ny vokatry ny fikarohana dia hita amin'ny fomba maro samihafa, anisan'izany ny fanadihadiana (fianarana 1), fandinihana (Fianarana 2), fanandramana (Fianarana 3), ary fampitam-baovao (Studies 4 sy 5).
Levin ME, Lillis J sy Hayes SC Oviana no mijery pôrnôgrafia amin'ny Internet? Fandinihana ny andraikitra manosika ny fanalavirana fanandramana in Fiankinan-doha amin'ny fananahana sy faneriterena: ny diarin'ny fitsaboana & fisorohana. Volana 19, Issue 3, 2012, pejy 168-180, DOI: 10.1080 / 10720162.2012.657150. (Fahasalamana)
Ny fahitan'ny pôrnôgrafika amin'ny Internet dia mahazatra eo amin'ny lahy antitra, nefa tsy fantatra hoe iza na iza, ary ho an'iza ny fiheverana toy izany. Ny dingana iray mety hampihetsi-po raha toa ka sarotra ny mijery azy dia ny fisorohana ny fanandramana: mitady hampihenana ny endriny, ny faharetana, na ny fahatsapana ny toe-javatra iainana manokana, na dia eo aza ny faharatsian'ny fitondran-tena. Ny fandinihana amin'izao fotoana izao dia nanadihady ny fifandraisana amin'ny Internet momba ny pôrnôgrafia sy ny fisorohana ny fanandramana amin'ny fahasamihafana ara-psikolojika (ny fahaketrahana, ny tebiteby, ny adin-tsaina, ny fiasa ara-tsosialy, ary ny olana mifandraika amin'ny fijerena) amin'ny alalan'ny fanadihadiana an-tserasera an-tserasera, 157 mpianatra eny amin'ny oniversite. Vokatry ny vokatra dia nampifandraisina matetika ny fijerena ny fahita matetika ny fiheverana ny fisainana, ka ny famerenana bebe kokoa dia mifandray amin'ny olana lehibe kokoa. Ankoatr'izay, ny fisorohana ny fanandramana dia nampifanaraka ny fifandraisana eo amin'ny fijerena sy ny dikan-teny roa sososocial, toy ny fiheverana ny ahiahiny sy ny olana mifandraika amin'ny fijerena tsy misy afa-tsy amin'ireo mpandray anjara amin'ny fisorohana ny fisainana ara-pahasalamana. Ireo valim-pifidianana ireo dia resahina ao anatin'ny sehatry ny fikarohana momba ny fisorohana sy fitsaboana manandramana izay mikendry io dingana io.
Fitiavana T, Laier C, Brand M, Hatch L ary Hajela R Ny fandinihan-tena amin'ny tranon-kala momba ny pôrnôgrafia amin'ny Internet: Review and Update in Siansa momba ny fitondran-tena 2015, 5 (3), 388-433; doi: 10.3390 / bs5030388. (Fahasalamana)
Maro no manaiky fa ny fitondran-tena maromaro dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny fiatrehana ny tsimokaretina amin'ny atidohan'ny olombelona, ​​ka mahatonga azy ireo tsy ho afaka hifehezany sy hampidiran-dra ny olona sasany. Momba ny fiankinan-doha amin'ny aterineto, ny fikarohana fikarohana momba ny neuroscience dia manohana ny fiheverana fa ny fizotry ny fizotry ny fifindran'ny aretina dia mitovy amin'ny fiankinan-doha. Ny Fikambanana Amerikanina Miasa amin'ny Psychiatrie (APA) dia niaiky ny fitondran-tena toy izany amin'ny Internet, Internet gaming, ho toy ny aretina mety hampidi-doza mitandrina ny fandalinana fanampiny, ao amin'ny fanavaozana 2013 ny Manuals Diagnostic sy Statistical. Ny endrika hafa mifandraika amin'ny Internet, ohatra, ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet, dia tsy voaresaka. Ao anatin'ity famerenana ity, dia manome fanazavana mikasika ireo foto-kevitra naroso eo amin'ny fiankinan-doha isika ary manome fanazavana momba ny fandalinana tsy ara-tsaina amin'ny Internet sy ny fikorianan'ny Internet. Ankoatra izany, dia nodinihinay ny boky misy boky tsy ara-tsaina momba ny fiankinan-doha amin'ny Internet ary mampifandray ny vokatra amin'ny modely fiankinan-doha. Ny fanadihadihana dia mamintina ny fehin-kevitra fa ny fiankinan-doha amin'ny sary vetaveta amin'ny Internet dia mifototra amin'ny sehatry ny fiankinan-doha ary mampiavaka ireo fomba amam-panao mitovy amin'ny fanandevozan'ny vatana Miaraka amin'ny fanadihadiana momba ny fiankinan-doha amin'ny aterineto sy ny Internet Gaming Disaster dia mahita porofo mahery vaika isika amin'ny fandinihana ny fitondrantenan'ny Internet mampiankin-doha toy ny fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena. Ny fikarohana fikarohana dia mila dinihina raha tsy misy fahasamihafana manokana eo amin'ny tsindrona sy ny fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena.
Ity endriny ity dia feno tanteraka Eto.
Luster SS, Nelson LJ, Poulsen FO, Willoughby BJ Ny fahantrana sy ny fitondran-tena eo amin'ny lahy sy ny vavy dia mampihorohoro? in Adult Emerging. 2013 Sep 1; 1 (3): 185-95. (Home)
Betsaka ny fikarohana dia naneho ny fiantraikany amin'ny olona amin'ny fahazazany sy ny fahazazany; Na izany aza dia tsy dia fantatra loatra ny vokatra mety hitranga amin'ny olon-dehibe vao misondrotra. Ity fianarana ity dia niresaka momba ny fahasamihafan'ny firaisana ara-nofo sy ny fitondrantenan'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatra. Ny mpianatra dia nampiditra mpianatra 717 avy amin'ny tranonkala kolejy efatra manerana an'i Etazonia, izay vehivavy lehibe indrindra (69%), Eoropeana amerikana (69%), tsy nanambady (100%), ary miaina ivelan'ny tokantranon'ny ray aman-dreniny (90%). Ny vokatra dia nanoso-kevitra fa ny firaisana ara-nofo dia tena mifandray amin'ny firaisana ara-nofo (mampiseho ny fomba fijery liberaly kokoa) ho an'ny lehilahy raha toa ka tsy dia misy loatra ny firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy. Ny Shyness dia mifamatotra amin'ny firaisana ara-nofo tsy mifaditrovana amin'ny fampiasana masturbation sy fampiasana sary vetaveta ho an'ny lehilahy. Ny Shyness koa dia voatery nifandraisany tamin'ny fitondran-tena ara-piraisana ara-nofo (koitalina sy tsy fisotroan-dronono) ary ny isan'ny mpiara-miasa amin'ny fiainana ho an'ny vehivavy. Ny fiantraikany amin'ireo fikarohana ireo dia resahina.
Maddox AM, Rhoades GK, Markman HJ Fijerena ny fitaovam-panaovan-javatra mampidi-doza na miara-miasa: Fikambanana mifandray amin'ny fifandraisana in Arch Sex Behav. 2011 Apr; 40(2):441–8.
Ity fikarohana ity dia namotopototra ny fikambanana iray eo amin'ny fijerena ny fitaovana ara-nofo (SEM) sy ny fifandraisana mifandraika amin'ny samirery 1291 tsy mpivady amin'ny fifandraisana am-pitiavana. Lehilahy marobe (76.8%) noho ny vehivavy (31.6%) dia nitatitra fa nitovy tamin'ny SEM izy ireo saingy ny antsasaky ny lehilahy sy ny vehivavy dia nitatitra fa indraindray nijery ny SEM niaraka tamin'ny mpiara-miasa (44.8%). Ny fanatanterahana ny fifandraisana, ny fanamafisana ny fifandraisana, ny fanoloran-tena, ny fahafaham-po ara-pananahana, ary ny tsy fitoviana dia nodinihina. Ireo olona izay tsy nahita ny SEM mihitsy no nanamarika ny hatsaran'ny fifandraisana amin'ny endriny rehetra noho ireo izay nahita ny SEM irery. Ireo izay nihevitra ny SEM tamin'ny mpiara-miasa dia nitatitra fanoloran-tena bebe kokoa sy fahafaham-po bebe kokoa noho ny an'ireo izay nahita ny SEM irery ihany. Ny hany fahasamihafana misy eo amin'ireo izay tsy nahita ny SEM sy ireo izay nihevitra azy ireo afa-tsy tamin'ny mpiara-miombon'antoka taminy, fa ireo izay tsy nihevitra azy io dia nanamora ny tsy fifankahazoana. Ny fiantraikan'ny fikarohana amin'ny ho avy eto amin'ity faritra ity sy ny fitsaboana ara-pananahana ary ny fitsaboana amin'ny mpivady dia resahina.
Negash S, Sheppard NV, Lambert NM ary Fincham FD Fanamarinana ara-barotra momba ny fifaliana amin'izao fotoana izao: ny sary vetaveta sy ny famerenana amin'ny laoniny in Journal of Sexual Research, 2015 Aug 25: 1-12. [Epub mialoha ny printy]. (Fahasalamana)
Ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia indostria mitentina miliara dolara izay niha-mora azo. Ny fihenam-bidy amin'ny fihenam-bidy dia mitaky fanovana ambany ny valisoa lehibe kokoa noho ny valisoa kely kokoa noho izany. Ny zava-baovao sy ny maha-zava-dehibe ny famporisihana ny lahy sy ny vavy ho valisoa voajanahary matanjaka indrindra dia mahatonga ny pôrnôgrafia amin'ny Internet ho mpikatroka miavaka amin'ny rafitry ny valisoa ao amin'ny ati-doha, ary misy vokany amin'ny fizotran'ny fanapaha-kevitra. Miorina amin'ny fandalinana teôlôjika momba ny psikolojia evolisiona sy neuroeconomics, fanadihadiana roa no nanandramana ny fiheverana fa ny fihinanana sary vetaveta amin'ny Internet dia misy ifandraisany amin'ny taha ambony amin'ny fihenan'ny fihenam-bidy. Ny fianarana 1 dia nampiasa endrika lava. Ny mpandray anjara dia nahavita ny fanontaniana momba ny fampiasana sary vetaveta ary ny fihenam-bidy amin'ny asa fihenam-bidy amin'ny ora 1 ary avy eo efatra herinandro taty aoriana. Ireo mpandray anjara nitatitra ny fampiasana sary vetaveta voalohany kokoa dia nampiseho fihenam-bidy fihenam-bidy avo lenta kokoa amin'ny Time 2, mifehy ny fihenam-bidy fanemorana aloha. Ny fandinihana 2 dia nosedraina noho ny antony ara-drariny tamin'ny famolavolana andrana. Ireo mpandray anjara dia notendrena tsy hifady hanina na sary vetaveta tiany mandritra ny telo herinandro. Ireo mpandray anjara izay tsy nampiasa sary vetaveta dia naneho fihenam-bidy ambany noho ny mpandray anjara izay nifady hanina tamin'ny sakafo tiany. Ny fikarohana dia manondro fa ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia valisoa ara-nofo izay manampy amin'ny fanemorana fihenam-bidy hafa noho ny valisoa voajanahary hafa. Ny fiheverana ara-teôria sy ara-pahasalaman'ireo fanadihadiana ireo dia nasongadina.
Ity singa ity dia mety ao ambadiky ny rindrambaiko Eto. jereo Ahoana no ahazoako miditra amin'ny fikarohana? ho an'ny soso-kevitra momba ny fidirana.
Ng JYS, Wong ML, Chan RKW, Sen P, Chio MTW, ary Koh D Ny fahasamihafana eo amin'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatra misy ifandraisany amin'ny firaisana ara-nofo eo anivon'ny tanora zandriny in Singapore amin'ny fanabeazana sy fisorohana ny SIDA, 2015, Boky Volamena. 27, No. 4, p. 373-385. doi: 10.1521 / aeap.2015.27.4.373. (Fahasalamana)
Ny fampiasana fanadihadiana iray hafa dia nodinihinay ny fahasamihafan'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny fisorohana sy ny zava-misy mifandraika amin'ny taovam-pananahana eo amin'ny tanora manatrika ny hôpitaly STI ao Singapore. Ny data dia nangonina avy amin'ny 1035 tanora mavitrika taloha 14 ka hatramin'ny 19 ary nandinika ny fampiasana ny regression Poisson. Ny herisetra amin'ny fifandraisana analôka dia 28%, izay misy vehivavy vavy mihoatra ny 10% (32%) noho ny lehilahy (23%) izay nanao azy hatramin'izay. Amin'ny fanadihadiana maro samihafa dia ny firaisana ara-boajanahary sy ny tsy fampiasana fanabeazana aorian'ny firaisana ara-nofo farany. Ho an'ny lahy, ny fifandraisana amin'ny anal dia mifandraika amin'ny adihevitra voalohany momba ny firaisana ara-nofo sy ny fanaraha-maso ivelany. Tamin'ireo vehivavy, dia nifandray tamin'ny fihetsika feno fihenjanana sy ny tsy fahampian'ny fahatokisana hanohitra ny fitaoman'ny namana amin'ny fanaovana firaisana. Ny fampiasana fimailo tsy tapaka ho an'ny taovam-pananahana dia ny 22% sy 8% ho an'ny lahy sy vavy, ny iray. Ny fandaharan'asan'ny STI momba ny fisorohana ny adolantsento dia tokony hiresaka momba ny firaisana ara-nofo, ny maha-lahy na maha-vavy, ary ny fiheverana ny toetran'ny tsirairay.
Ny lahatsoratra feno dia ao ambadiky ny rindrambaiko Eto. jereo Ahoana no ahazoako miditra amin'ny fikarohana? ? Ho toro-hevitra momba ny fidirana.
Peters ST, Bowen MT, Bohrer K, McGregor IS ary ID Neumann Oxytocine dia manakana ny fihinanana ethanôla ary ny fanafahana dopamine ethanol amin'ny indostria accumbens in Addiction Biology. Lahatsoratra voalohany nivoaka tamin'ny aterineto: 25 Janoary 2016, DOI: 10.1111 / adb.12362. (Fifandraisana)
Ny Alkohol (EtOH) dia iray amin'ireo fampiasana zava-mahadomelina be mpampihorohoro indrindra ary ny tena mampidi-doza indrindra. Na dia izany aza, ny safidy amin'ny fitsaboana amin'izao fotoana izao dia noho ny aretina azo avy amin'ny toaka. Ao anatin'izany toe-javatra izany, ny oxytocin (neuropeptide neuropeptide) (OXT) dia nipoitra ho safidy mety ho fitsaboana mety ho an'ny aretina maro ampiasaina amin'ny tsiranoka, anisan'izany ny fisotroan-toaka. Ny zava-kinendrin'ny OXT amin'ny fampihenana ny fihinanana sy ny faniriana be dia be dia be amin'ny fifehezana ny fiantraikan'ny neurochemical effects medikaly ao anatin'ny lalana dipamine mesolimbic. Na dia izany aza, ny fiantraikan'ny OXT amin'ny hetsika etOH ao amin'ity lalana ity dia mbola tsy voamarina. Eto dia asehontsika fa ny fampidirana ny fizakan-tena ao amin'ny EtOH (1 μg / 5 μl) dia nahalasa ny fizakan-tena EtOH (20 μg / 59 μl) amin'ny fifehezan-tena ho an'ny ETOH nandritra ny andro 28 (fivoriana fanjonoana 1.5) ao amin'ny mason'ny Wistar. Avy eo, nasehonay fa nitombo ny fanafody dopamine tao anatin'ny taom-pandrefesana natao tamin'ny etoh-naive sy raty nahazo ny etoh (15 g / kg, 10 isan-jato w / v) . Ny Icv OXT dia nanakana tanteraka ny famotsorana dopamine etOH amin'ny etoh-naive sy ny fombam-pihetseham-behivavy. Ny fihenan'ny etoh-induced release dopamine avy amin'ny OXT dia mety hanampy amin'ny fanazavana ny fahamendrehan'ny governemanta etOH, izay hita manaraka ny fampisehoana OXT icv.
Jereo ny taratasy feno Eto. Ity singa ity dia mety ao ambadiky ny rindrambaiko. jereo Ahoana no ahazoako miditra amin'ny fikarohana? ho an'ny soso-kevitra momba ny fidirana.
Pizzol, D., Bertoldo, A., & Foresta, C. Adolantsento sy pôrnôgrafiana web: ny vanim-potoana vaovao momba ny firaisana ara-nofo in Gazety iraisam-pirenena momba ny fitsaboana sy ny fahasalamana Aug 7 2015. pii: /j/ijamh.ahead-of-print/ijamh-2015-0003/ijamh-2015-0003.xml. doi: 10.1515 / ijamh-2015-0003. (Fahasalamana)
FAMPIANARANA: Ny sary vetaveta dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny fomba fiainan'ny tanora, indrindra amin'ny resaka fahazarana ara-pananany sy ny herisetra amin'ny pôrnôgrafia, ary mety hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny fihetsika sy ny fitondran-tenany.
TANJONA: Ny tanjon'ity fianarana ity dia ny mba hahalalana sy handinihana ny faharetan'ny faharetana, ny faharetany, ary ny fahitan'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny alàlan'ny tanora Italiana manatrika sekoly ambaratonga faharoa.
FITAOVANA SY FOMBA FANAMPINY: Mpianatra miisa 1,565 izay nanatrika ny taona famaranana ny lisea no voarohirohy tamin'ilay fandalinana, ary 1,492 1 no nanaiky hameno ny fanadihadiana tsy fantatra anarana. Ny fanontaniana maneho ny atin'ny fandinihana ity dia: 2) Impiry ianao no miditra amin'ny Internet? 3) Adiny firy no ifandraisanao? 4) Mifandray amin'ny tranonkala vetaveta ve ianao? 5) Impiry ianao no miditra amin'ny tranonkala vetaveta? 6) Ohatrinona ny fotoana laninao amin'izy ireo? 7) Impiry impiry ianao no mihetsika? ary XNUMX) Ahoana ny fanombatanao ny fanatrehan'ireo tranonkala ireo? Ny fanadihadiana statistika dia natao tamin'ny fitsapana nataon'i Fischer.
RESULTS: Ny tanora rehetra, izay saika isan'andro, dia afaka mahazo Internet. Ao anatin'ireo fanadihadiana ireo, 1,163 (77.9%) ireo mpampiasa aterineto dia miaiky ny fisotroana fitaovana mamoafady, ary amin'ireo 93 (8%) no mahazo ny tranonkala vetaveta isanandro, 686 (59%) ireo ankizilahy miditra amin'ireny tranonkala ireny dia mahita ny fihinanana sary pôrnôgrafia Manintona izany, 255 (21.9%) mamaritra izany ho toy ny mahazatra, mitatitra ny 116 (10%) fa mampihena ny fahalianana ara-pananahana ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny tena izy izany, ary ny sisa 106 (9.1%) dia mitatitra karazana fiankinan-doha. Ankoatra izany, ny 19% amin'ny mpirotsaka an-tsokosoko amin'ny ankapobeny dia mitatitra valim-panadinana tsy voajanahary, raha ny an'ny isan-jato kosa dia niakatra ho 25.1% ho an'ny mpanjifa tsy tapaka.
FAMARANANA: Ilaina ny mampianatra ny mpiserasera, indrindra fa ny tanora mpampiasa, amin'ny fampiasana azo antoka sy azo antoka ny Internet sy ny ao anatiny. Ankoatra izany, tokony hampitombo ny isan'ny fanentanana fanabeazam-bahoaka ny isam-batan'olona mba hampiroborobo ny fahalalàna momba ny resaka firaisana ara-nofo eo amin'ny Internet, na ny tanora sy ny ray aman-dreny.
Ny lahatsoratra feno dia ao ambadiky ny rindrambaiko Eto. jereo Ahoana no ahazoako miditra amin'ny fikarohana? Ho an'ny torohevitra momba ny fidirana.
Postman N sy Postman A (Fampidirana) Mampihetsi-po ny Fahafatesana: lahateny ampahibemaso amin'ny vanim-potoanan'ny fampisehoana Paperback, 20th Anniversary Edition, 208 pejy 2005 avy Penguin Books (voalohany navoaka 1985). Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza
Navoaka voalohany tao amin'ny 1985, ny adihevitra naterak'i Neil Postman momba ny vokatra mahatsiraky ny fahitalavitra momba ny politika sy ny lahateny ampahibemaso dia noraisina ho boky tamin'ny taonjato faha-20 tamin'ny taonjato faha-20. Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ny haino aman-jery elektronika mahafa-po kokoa - avy amin'ny aterineto ho an'ny finday ho an'ny DVD-dia nisy dikany bebe kokoa. Ny famonoan-tena ho faty dia faminaniana ara-paminaniana izay mitranga rehefa misy politika, asa fanaovan-gazety, fampianarana, ary na dia ny fivavahana aza. Izany koa dia rafitra iray mba hiverina hifehy ny haino aman-jery, mba hahafahany manatratra tanjona ambony indrindra.
Pratt R. sy Fernandes C Ny fomba fijerin'ny pôrnôgrafika ny fanombantombanana ny fanombantombanana ny ankizy sy ny tanora izay manimba vehivavy in Ankizy Aostralia, Volana 40 Issue 03, 2015 232, PP 241-10.1017. DOI: 2015.28 / cha.XNUMX. (Fahasalamana)
Nandritra ny telopolo taona lasa, ny «fanomezana» fanombanana ny fitondran-tena mahamenatra ny tanora sy ny fitsaboana dia ny maha-matotra ny fanaovana firaisana ara-nofo, ny vao mainka miorim-paka fa mety ho fitondran-tena ny tanora, miaraka amin'ny fandrosoana azo avy amin'ny fanafihana madinidinika ka hatramin'ny hetsika matotra kokoa, mampiditra. Heverinay fa ny tanora manao firaisana mametaveta dia mety samy nanjary tsy nahatsiaro tena tamin'ny fahavoazana naterak'izy ireo, raha toa kosa ka mila manao fandikan-dalàna mahery vaika kokoa hahazoana ny haavon'ny fanentanana voalohany azo tamin'ny alàlan'ny fihetsika kely kokoa. Ity foto-kevitra ity dia manolotra fifandraisana somary miteraka antony eo amin'ny faharetan'ny fihetsika mamoa fady; ny hamafin'ilay fihetsika sy ny halavan'ny fitsaboana ilaina hitantanana sy hitondrana ny olana.
Mety hisy fiantraikany eo amin'ny fanombanana sy ny fitsaboana ireo tanora mijangajanga ve ny fihenam-bona amin'ny sary vetaveta? Misy fifandraisana ve eo amin'ny fahasarotana sy ny famaritana ny asa fanaovan-dratsy atao, na ny fijerena sary vetaveta ary ny famerenana indray ny zavatra nodinihina niova tamin'ity fifandraisana ity? Ity lahatsoratra ity dia manadihady maromaro amin'ireto lohahevitra sy fanontaniana ireto.
Ny lahatsoratra feno dia ao ambadiky ny rindrambaiko Eto. jereo Ahoana no ahazoako miditra amin'ny fikarohana? ho an'ny soso-kevitra momba ny fidirana.
Reid RC, Davtian M, Lenartowicz A, Torrevillas RM, Fong TW Fomba fijery momba ny fanombanana sy ny fitsaboana ADHD olon-dehibe amin'ny lehilahy mpandoa hetra in Neuropsychiatry. 2013 Jun 1; 3 (3): 295-308. (Home)
Ity lahatsoratra ity dia manamarika ny vondron'olona fikarohana ankehitriny momba ny ADHD sy ny fitondrantenan'ny ADHD. Ny fijerena ny fomba fijery ny psikolojia sy ny tsy fahasalamana, dia misy soso-kevitra maromaro atolotra ho fanazavana ny antony mahatonga ny olona mitondra ADHD mety ho mora amin'ny fitondran-tena tsara. Ny torolàlana momba ny fanaraha-maso dia omena mba hanampiana ny mpitsabo hanavaka ny toetra mampiavaka ny ADHD olon-dehibe. Farany, misy ny fanoloran-kevitra amin'ny fitsaboana ADHD olon-dehibe amin'ny marary mpitsabo.
Shayer, M., Ginsburg, D. sy Coe, R, Telopolo taona izao - misy fiantraikany lehibe manohitra an'i Flynn? Ny fenitra fitsapana Piagetiana momba ny Volume & Heaviness 1975-2003. British Journal of Psychology momba ny fanabeazana, 2007, 77: 25-41. doi: 10.1348 / 000709906X96987
Fototra. Ny Volume & Heaviness dia iray amin'ireo fitsapana Piagetian telo nampiasaina tamin'ny fanadihadiana CSMS tamin'ny 1975/76. Na izany aza tsy toy ny fitsapana psychometrika mampiseho ny vokatr'i Flynn - izany dia miaraka amin'ireo mpianatra mampiseho fanatsarana tsy tapaka isan-taona mitaky famerenam-bidy - toa hita fa miharatsy hatrany ny fahombiazan'ny mpianatra Y7.
Tanjona. Nosafidiana ny santionan'ny sekoly iray lehibe sy solontenany mba hahafahan'ilay fitsapana miharatsy ny fahombiazana, ary azo heverina ho marim-pototra.
Sample. Vondron-taom-pianarana sivy amby enimpolo Y7 izay misy angon-drakitra momba ny fitsapana ny Volume & Heaviness ary ny oniversite Durham CEM Center MidYIS dia nisy santionan'ny mpianatra 10 nandritry ny taona 023 ka hatramin'ny 2000.
Method. Ny fiverenan'ny sekolin'ny mpianatra dia midika hoe Volume & Heaviness an'ny sekoly 'MidYIS 1999 isa mahazatra, ary ny fanisana ny fihemorana ao amin'ny MidYS = 100 dia mamela fampitahana amin'izay hita tamin'ny 1976.
Results. Ny isa nilatsaka isa nanomboka tamin'ny 1976 ka hatramin'ny 2003 dia ny zazalahy = 1.13 sy ny zazavavy = 0.6 level. Ny fahasamihafana nisy fikafika 0.50 ho an'ny zazalahy tamin'ny 1976 dia nanjavona tanteraka tamin'ny taona 2002. Teo anelanelan'ny 1976 sy 2003 ny haben'ny fihenan'ny zava-bitan'ny zazalahy dia 1.04 fiviliana mahazatra, ary ho an'ny zazavavy dia fihenan'ny refy mahazatra 0.55.
Famaranana. Ny fiheverana fa ny ankizy miala amin'ny sekoly ambaratonga voalohany dia miha-mahataka-doha sy mahay mandanjalanja - raha jerena ny vokatry ny vokatra Flynn, na ny antontan'isa momba ny fampiasana ny fepetra ao amin'ny Key Stage 2 SATS amin'ny matematika sy ny siansa - dia napetrak'i ireto fikarohana ireto.
Singleton O, Hölzel BK, Vangel M, Brach N, Carmody J sy Lazar SW. Ny fiovam-pahaizana momba ny fandinihan-java-manahirana amin'ny mason-tsivana arakaraka ny fitsabahana amin'ny fahatsiarovan-tena dia mifangaro amin'ny fanatsarana ny fahasalamana ara-tsaina in Fianjeran'ny Neuroscience, 2014 Feb 18; 8: 33. doi: 10.3389 / fnhum.2014.00033. (Miala amin'ny loko)
Ny olona dia afaka manatsara ny fari-piainany ara-psikolojia (PWB) amin'ny fampiasana ny fitsaboana ara-psikolojika, ao anatin'izany ny fampiharana ny fisainana misaina, izay voafaritra ho ny fanentanana tsy mitsara ny traikefa amin'izao fotoana izao. Vao haingana no nitateranay fa ny fitomboan'ny 8 isan-kerinandro mitombo ny fihenjanana (MBSR) dia mitarika amin'ny fampitomboana ny fifantohana amin'ny mason'ny ati-doha maromaro, izay voamarika amin'ny morphometry misy ny fanetsiketsehana voxel izay nanomana ny famerenana haingana dia haingana ny MRI, anisan'izany ny pons / raphe / locus coeruleus faritra ao amin'ny atidoha. Raha raisina ny andraikitry ny pons sy ny raphe amin'ny fihetseham-po sy ny fitsanganana, dia noheverinay fa ny fiovana eto amin'ity faritra ity dia mety hiova amin'ny fahatsarana. Ny ampahan'ny 14 olon-tsotra avy amin'ny tahirin-kevitra navoaka teo aloha dia nameno ny MRI anatramana ary nameno ny paikady PWB talohan'ny sy ny fandraisana anjara MBSR. Ny fiovan'ny PWB dia nampiasaina ho toy ny mpikirakira ho an'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fiovaovan'ny volavolan-dalavaly ao anatin'io faritra atidoha io izay efa naseho teo aloha ny fiovan'ny MBSR. Vokatry ny vokatra dia nanamarika fa nihoatra lavitra noho ny lalan'ny MBSR ny salanisa amin'ny sokajy dimy an'ny PWB sy ny totalin'ny PWB. Ny fiovana dia mifamatotra amin'ny fitomboan'ny fitomboan'ny fitomboan'ny fitomboan'ny fitomboan'ny fitambaran-tsolika anankiroa ao amin'ny atidoha. Ireo clusters ireo dia hita fa misy ny faritra misy ny tegmentum pontine, locus coeruleus, nucleus raphe pontis, ary ny voan'ny trigeminal misaina. Tsy nisy vondrona nifanaraka tamin'ny fiovan'ny PWB. Ity fanadihadiana mialoha ity dia manome soso-kevitra momba ny fifandraisan'ny PWB. Ny toerana misy ny atidoha dia ahitana ny tranonkala synthesis sy ny famotsorana ny neurotransmitters, ny norepinephrine sy serotonine, izay tafiditra amin'ny famolavolana ny fananganana sy ny fihetseham-po, ary mifandraika amin'ny karazana fihetseham-pifanampiana isan-karazany sy ireo dysfunctions amin'ny toeram-pitsaboana.
Stewart DN, Szymanski DM Ny Firaisan'ny Zatovo Ankizilahy Manan-jatovo ny Pôrnôgrafian'ny Mpinamana Romantika Ampiasaina Amin'ny Kôlejin'ny Fitiavan-tenany, ny Fifandraisana Aminy, ary ny Fialam-boly Mahafa-po in Sex Roles. 2012 May 6; 67 (5-6): 257-71. (Home)
Ny pôrnôgrafia dia samy mandroso sy mandamina any amin'ny kolontsaina maro eran-tany, anisan'izany ny kolontsaina Amerikana; Na dia izany aza dia tsy dia fantatra loatra ny fiantraikany ara-tsaina sy ara-pihetseham-po izay mety ho an'ny tanora zandriny tanora tafiditra amin'ny fifandraisana amam-piraisana ara-pananahana izay ahitan'ny mpiara-miasa aminy ny pôrnôgrafia. Ny tanjon'ity fianarana ity dia ny handinihana ny fifandraisana misy eo amin'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny lehilahy, ny fahita matetika sy ny fampiasana olana, eo amin'ny fiarahamonina ara-psikolojika sy ny fifandraisana amin'ny heterosexual relationships eo anivon'ireo mpianatra eny amin'ny tanora 308. Ankoatra izany, ny endriky ny psikometrika ampiasaina amin'ny mari-pahaizana momba ny sary vetaveta "Perceived Partner" dia omena. Niditra an-tsitrapo tao amin'ny anjerimanontolo iray any amin'ny faritra atsimon'i Etazonia ny mpandray anjara ary nahavita fanadihadiana an-tserasera. Ny vokatra azo dia nanambara ny tatitra nataon'ny vehivavy momba ny fampiasana sary vetaveta ho an'ny lehilahy mpiara-belona taminy fa tsy nifandray tamin'ny kalitaon'ny fifandraisana izy ireo. Ny fiheverana bebe kokoa ny fampiasana olana amin'ny pôrnôgrafia dia tsy mifanaraka amin'ny fiheveran'ny tena manokana, ny hatsaran'ny fifandraisana, ary ny fahafaham-po ara-pananahana. Ankoatr'izay, ny fizakan-tena dia nanelanelana ny fifandraisana misy eo amin'ny fahitana ny fampiasana sary vetaveta amin'ny namana sy ny fifandraisana amin'ny olana. Farany, ny valiny dia nanambara fa ny fihenan'ny fifandraisana dia nanamora ny fifandraisana misy eo amin'ny fahatsapana ny fampiasana sary vetaveta amin'ny sarany sy ny fahafaham-pitondran-tena ara-pananahana, ary tsy dia mahafa-po loatra ny mifandray amin'ny halavan'ny fifandraisana lava.
Masoandro C, Bridges A, Johnason J ary Ezzell M Pôrnôgrafia sy ny votoatin-dehilahy firaisana: Fandinihana ny fandrosoana sy ny fifandraisana ara-piraisana in Arsiva momba ny firaisana ara-nofo Voalohany amin'ny aterineto: 03 Desambra 2014, pp 1-12. (Fahasalamana)
Ny pôrnôgrafia dia lasa loharanom-panabeazana ara-pananahana. Mandritra izany fotoana izany, ny sary vetaveta ara-barotra mahazatra dia nivezivezy manodidina ny sora-baventy miharo herisetra sy ny fanimbana ny vehivavy. Na dia izany aza, ny asa kely dia natao tamin'ny fijerena ny fikambanan'ny pôrnôgrafia sy ny fihaonana ara-pananahana: Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Inona no andraikitry ny pôrnôgrafia amin'ny lalao ara-piraisana ara-nofo misy eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy? Ny teoria kirakirain'ny cognitive script dia manamafy fa ny scripting media dia mamorona modely heuristic mora foana ho an'ny fanapahan-kevitra. Ny mpampiasa kokoa dia mijery pejin-gazety iray manokana, ny fijerena ireo fitsipika mifehy ny fihetsika ireo dia lasa ao amin'ny sehatr'izy ireo eran'izao tontolo izao ary ny azo inoana kokoa dia ny hampiasana ireo scriptes ireo mba hampiharana ny traikefa niainan'ny fiainana. Manapotika ny pôrnôgrafia dia mamorona tsikera momba ny firaisana izay mitarika ny traikefa ara-nofo. Mba hitsapana izany dia nandinika ny oniversite 487 (taona 18-29 taona) any Etazonia izahay mba hampitaha ny taham-pihetseham-pon'ny sary vetaveta amin'ny preferences ara-nofo sy ny fanahiana. Ny vokatra dia nampiseho ny sary vetaveta misy lehilahy iray, ny azo inoana kokoa amin'ny fampiasana azy mandritra ny firaisana ara-nofo, fangatahana ny firaisana ara-pananany manokana amin'ny vady aman-janany, miteraka eritreritra momba ny sary pôrnôgrafia mandritra ny firaisana ara-nofo mba hihazonana ny fanambarana, ary manana ahiahy manoloana ny fahatsapany ara-pananahana sy vatana sary. Ankoatra izany, ny fampiasana sary vetaveta avo lenta dia mifandraika amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny lahy sy vavy. Miaiky isika fa ny sary vetaveta dia manome modely heuristic mahery izay tafiditra amin'ny fanantenana sy fitondran-tenan'ny lehilahy mandritra ny fihaonana ara-pananahana.
Masoandro C, Miezan E, Lee NY sy Shim JW Ny fampiasana sary vetaveta Koreana lehilahy, ny fahalianany amin'ny pôrnôgrafia mahery fihary, ary ny fifandraisany amin'ny firaisana ara-nofo in Gazety iraisam-pirenena momba ny fahasalamana ara-pananahana, Volana 27, Issue 1, 2015 pejy 16-35. DOI: 10.1080 / 19317611.2014.927048 Published on: 20 Nov 2014. (Fahasalamana)
Tanjona: Ny tanjon'ilay fandinihana dia ny fanombanana ny fifandraisana eo amin'ny fampiasana sary vetaveta (na ny hafanam-po sy ny fahalianana amin'ny sary vetaveta tafahoatra) sy ny fifandraisana ara-piraisana ara-piraisana. Fomba fiteny: Nandray anjara tamin'ny fanadihadiana an-tserasera ny mpianatra Koreana Tatsimo, lehilahy dimy amby enimpolo sy sivinjato. Vokatra: Ny ankamaroan'ny (xNUMX%) tamin'ireo namaly no nijery sary mamoafady, ary ho an'ireo izay mavitrika (mpanadihady 84.5), hitantsika fa ny tombotsoan'ny sary vetaveta ratsy na mahatsiravina dia mifandraika amin'ny traikefa an-dàlam-pananahana amin'ny pôrnôgrafia mpiara-miasa, ary ny safidy hampiasa sary mamoafady mba hahatratrarana sy hitazonana ny fientanam-piraisana ara-nofo amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny namana. Famaranana: Tsy nifanaraka ny zava-nisy fa ny tsy fitovian-tsasatry ny fanadihadiana Amerikana dia mitovy amin'ny fomba fiasa, izay manoro hevitra fa tokony hisy ny fiheverana ny fahasamihafan'ny kolontsaina.
Sutton KS, Stratton N, Pytyck J, Kolla NJ, Cantor JM Ny toetra mampiavaka ny marary amin'ny karazana fitsaratsaram-poana fisainana: tabilao momban'ny quantitative ho an'ny lehilahy 115 in J Sex Sexual. 2015 Dec;41(6):563–80. (Home)
Ny fitsaratsaram-poana dia mitoetra ho mahazatra nefa mihatsaravelatsihy saingy tsy dia takatry ny marary. Na dia eo aza ny fahasamihafana eo amin'ny fampisehoana ny marary mikasika ny fijerena ny tsy fahampian'ny aretina, ny literatiora dia mitazona fomba fitsaboana izay heverina fa hampiharina amin'ny tranga rehetra. Ity fomba fiasa ity dia hita fa tsy mahomby, na dia eo aza ny fampiharana azy efa am-polony taona maro. Ny fandinihana amin'izao fotoana izao dia nampiasa fomba maro mba handinihana ny momba ny demografika, ny fahasalamana ara-tsaina ary ny firaisana ara-nofo mifandray amin'ny karazam-pitsaboana iraisana ara-pahasalamana momba ny fitsaboana amin'ny aretina. Ny fikarohana dia manohana ny fisian'ny karazana sokajy, izay samy manana ny karazana endri-tsoratra. Ny fanadihadiana ara-psikolojika dia nitatitra betsaka kokoa tamin'ireo mpiara-miombon'antoka firaisana ara-nofo, fanararaotana bebe kokoa, fanombohana ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny vanim-potoana taloha, ary ny novokariny ho toy ny hery mitarika eo amin'ny fitondran-tenany. Ireo mpitsabo mpanohitra tsy mitongilana dia nitatitra tebiteby betsaka, tebiteby, ary fampiasana ny firaisana ara-nofo ho toy ny tetikady fisorohana. Ireo mpivaro-tena mahatsiravina dia nitatitra fa nisy ny ejaculation vao haingana ary taorian'izay dia nanomboka ny fahamaotiana. Ireo marary voatendry dia tsy dia liana loatra nitatitra ny fanararaotana, ny asa, na ny olana ara-bola. Na dia marim-potoana aza, ity lahatsoratra ity dia manolotra fandalinana farafaharatsiny izay nipoiran'ny karazam-pitenenana fototra avy amin'ireo singa tena mendrika indrindra amin'ny fanombanana ara-pananahana ara-nofo. Ny fianarana amin'ny ho avy dia mety hampihatra teknika statistika ara-pitaovana, toy ny fanadihadiana ny cluster, mba hahalalana hoe firy ny karazam-pitenenana toy izany rehefa mijery mandinika.
Misy fanamarihana ity lahatsoratra ity Eto.
Svedin CG, Åkerman I sy Priebe G Mpisera matetika amin'ny pôrnôgrafia. Fampahalalana mikasika ny pejy in Journal of Adolescence, Volana 34, Issue 4, Aogositra 2011, Pejy 779-788. doi: 10.1016 / j.adolescence.2010.04.010. (Fahasalamana)
Ny fampiasana matetika ny sary vetaveta dia tsy nodinihina talohan'izay. Tao amin'ny fanadihadiana Soedoà 2015 lehilahy mpianatra taona 18 no nandray anjara. Nisy vondron'ireo mpisera matetika ny pôrnôgrafia (N = 200, 10.5%) nianatra momba ny fiaviana sy ny fifandraisana psychosocial. Ny mpiserasera matetika dia manana fihetsika tsara kokoa amin'ny pôrnôgrafia, matetika "matetika" no "mijery" sary vetaveta ary mijery sary vetaveta matetika. Nampiasaina matetika koa ny fampiasana olana maro. Maro ny mpampiasa sary mamoafady no mety ho mipetraka any amin'ny tanàn-dehibe iray, matetika no misotro toaka be loatra, manana faniriana ara-nofo bebe kokoa ary matetika no namidy hanao firaisana noho ny zazalahy hafa mitovy taona aminy.
Ny fijerena matetika momba ny pôrnôgrafia dia azo raisina ho toy ny fitondran-tena sarotra izay mila fiheverana bebe kokoa avy amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ary koa horaisina amin'ny dinidinika amin'ny klinika.
Valliant, GE Fandresena amin'ny fanandramana: Ireo lehilahy ao amin'ny Harvard Grant Study. 2012 Harvard University Press. ISBN 9780674059825. (Fifandraisana)
Famaritana momba ny boky
Tamin'ny fotoana nipetrahan'ny olona maro manerana izao tontolo izao ny folo taona farany, ny fanadihadiana lava indrindra momba ny fampandrosoana ny zanak'olombelona dia manolotra vaovao mahafaly ho an'ny taon-taonany vaovao: mitohy mihatsara ny fiainantsika amin'ny taona manaraka, ary matetika mahomby kokoa ny fiainantsika than before.
Nanomboka tamin'ny 1938, ny Fikarohana Grant momba ny Fampandrosoana ho an'ny olon-dehibe dia nanasongadina ny fahasalamana ara-batana sy ara-pihetseham-po amin'ny lehilahy 200, manomboka amin'ny fotoam-pianarany. Ny fampifanarahana ara-pananahana amin'ny fiainana ankehitriny dia nitatitra ny fiainan'ny lehilahy hatramin'ny taona 55 ary nanampy antsika hahatakatra ny fahaleovan-tenan'ny olon-dehibe. Ankehitriny dia manara-maso ireo lehilahy ireo i George Vaillant mandra-pahatapitry ny faha-90 taonany, ka ny antontan-taratasiny voalohany dia ny hoe maniry lavitra ny fisotroan-dronono tafahoatra.
Ny tatitra momba ny lafiny rehetra amin'ny fiainan'ny lehilahy, tafiditra ao anatin'izany ny fifandraisana, ny politika ary ny finoana, ny paikady sy ny fampiasana toaka (ny fanararaotana azy no tena mampidi-doza indrindra ho an'ny fahasalamana sy fahasambarana eo amin'ny olom-pianatra), ny Triumphs of Experience dia mizara fanandramana mahagaga maro. Ohatra, ireo olo-malaza amin'ny fahanterana dia tsy voatery ho tsara amin'ny fiainana andavan'andro, ary ny mifamadika amin'izany. Na dia nanamafy aza ny fanadihadiana fa ny fanarenana amin'ny fahazazana tsy misy hatry ny ela dia azo antoka fa loharanom-paharetana mandritra ny androm-piainana ny fahatsiarovana ny fahazazana. Ny fanambadiana dia mitondra fifaliana bebe kokoa aorian'ny taona 70, ary ny fahanterana ara-batana aorian'ny 80 dia voafaritra noho ny fitiavan-tena noho ny fahazarana novolavolaina talohan'ny taonan'ny 50. Ny fahantrana amin'ny fitomboan'ny fahanterana miaraka amin'ny fahasoavana sy ny fahamendrehana, dia toa miseho amin'ny tenantsika bebe kokoa noho ny toetran'ny générique isika.
Voon V, Mole TB, Banca P, Porter L, Morris L, Mitchell S, et al. Ny fahasamihafana ara-pahasalamana vokatry ny firaisana ara-nofo eo amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny olona miaraka amin'ny fihetsika tsy maotina in PLOS ONE. : 2014 Jul 11; 9 (7): e102419. (Home)
Na dia ny fomba fitenin'ny firaisana ara-nofo (CSB) aza dia nofaritana ho toy ny "fiankinan-doha" amin'ny fiankinan-doha amin'ny fiharian-karena na fihetsika mahazatra na mahasalama izay mety hitantana ny valin-karena voajanahary sy zava-mahadomelina, kely dia fantatra amin'ny valinteny momba ny fitaovana ara-pananahana ao amin'ny olona miaraka amin'ny CSB. Eto, ny fanodikodinam-peo amin'ny votoaty samihafa mifangaro dia voamarina amin'ny olon-tsotra sy tsy manana ny CSB, mifantoka amin'ny faritry ny faritra voajanahary fantatra amin'ny fianarana aloha ny fanehoan-kevitra momba ny zava-mahadomelina. Ny olon'ny CSNUMX CSB sy ny mpilatsaka an-tsitrapo 19 dia nodinihina tamin'ny fampiasana MRI ho fampitahàna horonantsary miharihary amin'ny horonan-tsary mampiady saina. Noraisina ny fanombanana ny faniriana ara-nofo sy ny fitiavana. Mifanaraka amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ara-pahasalamana, ireo ankizy CSB dia nanana faniriana lehibe saingy mitovy hevitra mampiavaka azy ireo ho setrin'ny horonantsary miharihary. Ny fiatrehana ireo sioka ara-piraisana ara-pananahana ao amin'ny CSB raha oharina amin'ny olom-bitsy tsy miankina CSB dia mifandraika amin'ny fampiatoana ny dingal cedule, ventral striatum sy amygdala. Ny fifandraisana miasa eo amin'ny tambajotra mivelatra amina striatum-amygdala dteral dia mifandray amin'ny faniriana ara-nofo ara-nofo (fa tsy mankafy) ho an'ny antokom-pahaizana maherin'ny CSB raha tsy misy ny CSB. Ny fisaraham-bazana eo amin'ny faniriana na ny faniriana sy ny fitiavam-bavaka dia mifanaraka amin'ny teoria an-tsitrapo manosika ny CSB toy ny amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Ny fahasamihafana eo amin'ny fahasamihafana eo amin'ny fanodikodinam-pahaizana momba ny firaisana ara-nofo dia hita ao amin'ny lohahevitra ao amin'ny CSB any amin'ny faritra izay efa voarohirohy tamin'ny fanadihadiana momba ny fihokoana. Ny fifindran'ny fitomboan'ny corticostriaté cirque circonstances ao amin'ny CSB taorian'ny fanoheran'ny siansa momba ny firaisana ara nofo dia manolotra soso-kevitra momba ny rafitra tsy miankina izay mahatonga ny CSB sy ny tanjona biolojika azo atao amin'ny fitsabahana.
Weaver JB, Weaver SS, Mays D, Hopkins GL, Kannenberg W, McBride D Ny fambara ara-tsaina sy ara-batana ary ny fampiasana ny fampitam-baovao ara-piraisana ara-nofo amin'ny olon-dehibe in Journal of Medicine. 2011 Mar;8(3):764–72.
FAMPIANARANA: Ny porofo mampihetsi-po amin'ny toe-javatra samihafa amin'ny kolontsaina dia mampiseho fa ny fampiasana ny filazam-pahaizana ara-pihetseham-behivavy ara-pananahana (SEMB, izany hoe fanjifana sary vetaveta) dia mifandraika amin'ny fahatsapana ara-pahasalamana ara-pahasalamana mahatsiravina sy ny fitondran-tena, maro izay miteraka risika amin'ny fifindran'ny VIH / STD.
AIM: Tena tsy voamarika, ary ny fifantohana eto, dia fifandraisana mety misy eo amin'ny SEMB sy ny indostrian'ny tsy fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana.
FAMPIANARANA MAINTIRINA FAHALALAHANA: Nandinika roa ambaratonga (mpampiasa, nonuser) ao amin'ny SEMB ny fanovana amin'ny marika enim-pahatapitry ny fahasalamana tsy tapaka (soritr'aretina mipoitra, fahaketrahana ara-tsaina sy ara-pahasalamana ara-pahasalamana, toe-pahasalamana, kalitao ary ny endriky ny vatana).
FAMPITANDREMANA: Nisy fanadihadiana natao tamin'ny 559 ao Seattle-Tacoma amin'ny fampiasana olon-dehibe amin'ny 2006. Ny famolavolana teti-bola samihafa maromaro voafaritra ao amin'ny SEMB avy amin'ny mpanadihady (2 × 2) dia namorona ny fanitsiana maro ho an'ny demografika maromaro.
RESULTS: Ny SEMB dia notaterin'ny 36.7% (n = 205) ny ohatra. Ny ankamaroan'ny mpampiasa SEMB (78%) dia lehilahy. Taorian'ny nanitsiana ny demografika, ireo mpampiasa SEMB dia nampitaha ireo soritr'aretina goavam-be, ny fahamendrehan'ny fiainana, ny fahantrana ara-tsaina sy ara-batana kokoa ary ny fihenan'ny fahasalamana.
FEHINY: Ny valiny dia mampiseho fa ny tondro ara-pahasalamana ara-tsaina sy ara-batana dia samy hafa be amin'ny SEMB, izay manondro ny lanjan'ireo fampidirana ireo antony ireo amin'ny fikarohana amin'ny ho avy sy ny ezaka fandaharana. Manokana, ny valim-pikarohana dia manondro fa ny paikady fampiroboroboana ny fahasalamana ara-pananahana mifototra amin'ny fiatrehana ny SEMB an'ny olona sy ny filàn'izy ireo ara-pahasalamana dia mety ho fomba iray mahomby hanatsarana ny fahasalamana ara-tsaina sy hiatrehana ny vokatra azo sorohina azo sorohina mifandraika amin'ny SEMB.
Weber M, Fangatahana O sy Daschmann G Peers, Ray aman-dreny sy pôrnôgrafia: ny famakafakana ny fanararaotan'ny zatovo amin'ny fitaovam-pananahana ara-pananahana sy ny fampivelarana in Firaisana ara-nofo sy kolontsaina, Desambra 2012, Volana 16, Issue 4, pp 408-427. (Fahasalamana)
Noho ny fanadihadiana an-tserasera nataon'ny tanora 352 antitra teo anelanelan'ny 16 sy 19, dia nodinihina ny fampiasana horonan-tsary sy horonan-tsary mamoafera miaraka amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny fampiasana sy ny fampitoviana ny fahaleovan-tenan'ny tanora, ny fiantraikany eo amin'ny tarika ary ny fiheverana momba ny firaisana ara-nofo. Hitantsika fa maro ny tanora mampiasa sary vetaveta na sarimihetsika vetaveta. Ireo mpandinika izay mihevitra ny tenany ho tsy mahaleo tena amin'ny tontolo iainany, indrindra fa ny ray aman-dreniny, dia mampiasa ny pôrnôgrafia matetika kokoa. Ho an'ireo ankizivavy dia mihatra koa izany raha toa ka manombantombana ny fampiasana azy ao anatin'ny tarika misy azy ho toy ny tena lehibe, ary ho an'ny ankizilahy, raha miresaka matetika momba ny pôrnôgrafia izy ireo ao anatin'ny tarika misy azy. Ny fiheverana avo lenta amin'ny haino aman-jery an-tserasera ihany koa dia mitazona an-tanana miaraka amin'ny fomba fijerin'ny olona amin'ny ankapobeny ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny ankapobeny eo amin'ny fiainana ary ny ankamaroan'ny olona dia mahazo fomba amam-panao samihafa kokoa.
Wilson, Gary 2014 Ny atidoha eo amin'ny pôrnô: Pornografie amin'ny Internet ary ny firoboroboan'ny fiankinan-doha, Commonwealth Publishing ISBN 978-0-9931616-0-5
"Ny atidoha amin'ny pôrnôgrafia dia nosoratana tamin'ny fiteny mazava mazava tsara ho an'ny manam-pahaizana sy ny laika ary dia miorim-paka ao anatin'ny foto-kevitry ny neuroscience, ny psikolojian'ny fitondrantena ary ny evolisiona evolisiona ... Amin'ny maha psychologist mpitsabo ahy, dia nandany nandritra ny efapolo taona nikaroka ny fototry ny motivation ary afaka manamafy fa ny fanadihadian'i Wilson dia mifanaraka tsara amin'ny zava-drehetra hitako. "
Profesora Frederick Toates, Oniversite Misokatra, mpanoratra ny Fomba Firaisana Amin'ny Firaisana: Ny Fihetsiketsehana.
Azo alaina avy amin'ny mpitory.
Wright PJ, Masoandro C, Steffen NJ ary Tokunaga RS Pôrnôgrafia, ny toaka, ary ny fitondrantena ara-pananahana ao amin'ny Monographes Volume Volume 82, Issue 2, 2015 pejy 252-270. Navoaka tamin'ny aterineto: 19 Nov 2014. DOI: 10.1080 / 03637751.2014.981558. (Fahasalamana)
Ity fandinihana ity dia nanadihady ny fahalianan'ny lehilahy heterosexualité alemanina sy ny firotsahany amina karazana fitondran-tena manjaka voamarina tato anatin'ny fanadihadiana momba ny sary vetaveta. Ny fahalianana amin'ny fijerena sary mihetsika mamoafady malaza na fanjifana sary vetaveta matetika dia mifandraika amin'ny fanirian'ny lehilahy hirotsaka na efa nanao fihetsika toy ny fisarihana volo, kapoka mafy ny mpiara-miasa mba hamela marika, ejaculation amin'ny tarehy, fitanana, fidiranana indroa ( izany hoe miditra an-doha amin'ny vodin'ny vodilanitra na ny fivaviana miaraka amina lehilahy hafa), vava vava (izany hoe miditra an-tsokosoko amin'ny vady ary avy eo nampiditra mivantana ny filahiana tao am-bavany), nibontsina ny penina, nikapoka ny tarehy, kenda ary niantso anarana (oh: slut "na" janga "). Mifanaraka amin'ny fikarohana andrana taloha momba ny vokatry ny alikaola sy ny fijerena sary vetaveta ny mety hisian'ny fanerena ara-nofo ataon'ny lehilahy, ireo lehilahy izay nanao fihetsika natanjaka indrindra dia ireo izay matetika nihinana sary vetaveta ary nisotro toaka matetika talohan'ny na nandritra ny firaisana.
Ity lahatsoratra ity dia azo jerena maimaim-poana Eto.